Shabiixa - Wikipedia
Shabiixa () waa wadarta shabiix, oo ah qof qowlayste mooryaan iyo calooshiis u shaqayste ah, shabiixa ayaa ah erey lahjad carbeed ah oo soo ifbaxay sideetamaadkii, kooxda magacaas loo bixiyo ayaa adeegsta xoog iyo handadaad ay kula kacaan qof ay ka awood badanyihiin. kooxdan ayaa u shaqaysa qof ama maamul awood u leh inuu dhibaato y geysto wixii isaga ka horyimaada,
Erayga carabiga ah ee شبح ayaa micno ahaa waxa uu udhigmaa reer aakhiraad halkaas ayayna ka imaatay kalimadaan Shabiixa, oo halka qofna waa Shabiix. waxaa kaloo la sheegaa inuu ereyga kasoo jeedo shabiix oo la macno ah in qof lagu xiro labo dhakowyo dhexdood, si loo ciqaabo,
Hada caan ka yihiinEdit
waayadaan waxaa ay aad u buuxaan wadanka Suuriya waa koox calooshood u shaqystayaal iyo Maleeshiyo qowlaysato ah oo ka jirta wadanka Suuriya, kuwaas oo taageera Madaxweynaha dalkaas Bashar al-Assad. Maleeshiyadaan ayaa magacooda adduunka caan ka noqday laga bilaabo 2011 kadib markii uu bilwday Kacdoonka Suuriya.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shabiixa&oldid=158485"
Last edited on 17 Luuliyo 2016, at 14:57
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 17 Luuliyo 2016, marka ee eheed 14:57.